‘हजार जुनीसम्म’ चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएसँगै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । युट्युबमा ट्रेलर आएको १० दिनको अन्तरालमा यसलाई १० लाख बढीले हेरिसकेका छन् । चलचित्र चर्चित सिरिज ’नाई नभन्नु ल’ विकाश राज आचार्यले निर्देशन गरेका हुन् । लेखक हुँदै निर्देशनमा आएका विकाशले केहि वर्ष यता नाइँ नभन्नु ल सिरिजलाई नै अगाडी बढाई रहेका छन् । तर , यतिबेला उनले आफ्नो व्यानरबाट पर हटेर ’हजार जुनीसम्म’ निर्देशन गरेका छन् । टिम उस्तै भएपनि मर्म भने केहि फरक छ । यसपटक कथ्य शैली नै भिन्न रहेको विकाश बताउछन् ।
उनीसँग गरिएका चलचित्र बिशेष कुराकानीः
के यो नाइँ नभन्नु ल ६ हो ? भन्ने चर्चा पनि चलिराछ नि ?
नाई भन्नु ल पनि सिरिज हो सिक्वेल होइन । त्यसैले त्यहाँ पनि कथा विभिन्न तरिकाले प्रस्तुत गरेका थियौ । यस पटक पनि त्यहि हो । हामीले केवल प्याटर्न फरक गरेका हौ । त्यसैले त्यस्तो फरक हुँदैन , मलाइ । तर , म आतुर छु कि दर्शकले कस्तो प्रतिक्रिया दिनु हुन्छ । फिल्म मन छुने बनाएको छु । यसमा हासो , रोदन , माया , पारिवारिक दायित्व सबै मिश्रित छ । साउन ३० मा लाग्दैछ , त्यसैले आतुर छु ।
चलचित्रमा आर्यन सिग्देल, स्वस्तिमा खड्का, सलोन बस्नेत, संचिता लुइँटेल, शिवहरी पौडेल, अखिलेस प्रधान, संचिता लुइँटेल र अनुभव रेग्मी लगायतको अभिनय रहेको छ । चलचित्र प्रेम कथामा आधारित फ्यामिली ड्रामा भनिएको छ । निर्देशक आचार्यले फिल्मको पटकथा सामिप्यराज तिमल्सेनासंगको सहकार्यमा तयार पारेका हुन् । फिल्ममा आर्यनसंगै स्वस्तिमा खड्का , संचिता लुइँटेल , शिवहरि पौडेल , सलोन बस्नेत , अनुभव रेग्मीसंगै अखिलेस प्रधानको अभिनय रहेको छ । फिल्ममा कविराज गहतराजको नृत्य , उदयराज सोताङ्ग, राजनराज सिवाकोटी, बसन्त सापकोटा र प्रविन पौडेलको संगीत, अर्जुन जिसीको सम्पादन छ । यसमा विशाल चाम्लिङ निर्माता छन् भने कार्यकारी निर्मात्री कविता रेग्मी हुन् । चलचित्र आउँदो साउन ३० मा प्रदर्शन हुँदैछ ।